३३ केजी सुन काण्डः बाजेको सेकुवाका सञ्चालक १० लाख धेरौटीमा छुटे
२०७६ पुस २४ गते १५:३७
मोरङ । । २२ किलो सुन काण्डमा मुछिएका प्रमुख अभियुक्तमध्ये बाजेको सेकुवाका सञ्चालक चेतन भण्डारीलाई अदालतले धरौटीमा छाडेको छ । भण्डारीलाई जिल्ला अदालत मोरङले सोमबार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको हो । उक्त प्रकरणपछि फरार रहेका भण्डारी एकैपटक अदालतमा हाजिर हुन पुगेका थिए । ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका मुख्य तस्कर चुडामणि उप्रेती भने थुनामै रहेका छन् । अमेरिकाबाट आइतबार आएका भण्डारी सिधै अदालतमा हाजिर ... read more...
क्यासिनोका फँटाई: रोयल र माजोङमा कसरी छिरे नेपाली ?
२०७६ पुस २३ गते १०:५१
काठमाडौं । नेपालीलाई जुवा खेलाएमा क्यासिनो सञ्चालकलाई ४ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै ईजाजत समेत खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशलाई कडाई गर्न यस्तो कानुनको व्यवस्था गरेको थियो । नेपाली जुवाडेको क्यासिनो प्रवेश रोक्न सरकारकाले कडा प्रावधानसहितको क्यासिनो व्यबस्थापन नियमावली जारी गरेको दुई बर्ष भयो । आर्थिक अध्यादेशमा क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रोयल्टी चालु आर्थिक बर्षद ... read more...
हुण्डीको अवैध १ करोड ८१ लाख नगद र चेकसहित ४ जना समातिए
२०७६ पुस २२ गते ०९:३३
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले न्यूरोडका विभिन्न स्थानममा छापा मारेर हुण्डीको अवैध कारोबारमा संलग्न तीन जनालाई लाखौं रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंका गोपाल अग्रवाल, ताहचलका कमल अग्रवाल, सनसरी धरानका नारायण अग्रवाल र सिन्धुपाल्चोकका भोला नेपाल रहेका छन् । अपराध महाशाखाका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका नेपालको साथबाट ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद र विभिन्न बैंकका ... read more...
क्रेडेन्सियल ह्याकिङ प्रकरणः १ करोड रुपैयाँसहित फरार नेपाल समातिए
२०७६ पुस २० गते २०:३५
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको चर्चित क्रेडेन्सियल ह्याकिङ प्रकरण बाहिरिएपछि १ करोड रुपैंयाँसहित फरार भएका थप एक अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मोरङ रंगेली नगरपालिका-२ का ४३ वर्षीय दिपक नेपाल रहेका छन् । उनलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । क्रेडेन्सियल ह्याकिङमार्फत १ करोड रुपैयाँ बैंकबाट निकाली उनी फरार भएको अपराध महाशाखाको दावी छ । ... read more...
सरकार र उखु कृषकबीच ५ बूँदे सहमति, '६ गतेभित्र भुक्तानी हुन्छ'
२०७६ पुस १८ गते २१:१९
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलरत उखु कृषकबीच ५ बूँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ । उक्त सहमति उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको हो । सरकार र आन्दोलनरत उखु कृषकबीच भएको सहमति अनुसार चिनी मिल सञ्चालकहरुले किसानको बक्यौता रकम माघ ७ गतेभित्र उपलब्ध गराउन समन्वय गर्नेछ । सरकारले भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न स्वचालित मूल्यबारे अध्ययन गर्ने, सरकारले दिने अनुदान समयमै उपलब ... read more...
महानगरको मापदण्ड विपरित सीजी ल्याण्डमार्क, बैध बनाउने प्रयास
२०७६ पुस १८ गते १९:२०
चितवन । मुलुककै प्रतिष्ठित व्यापारीक घराना सीजी ग्रुपको एकपछि अर्को कतुर्त सार्वजनिक भइरहेका छन् । व्यापारका नाममा केन्द्रदेखि स्थानिय सरकारलाई यतिवेला चौधरी ग्रुपले चुनौती दिएको छ । नक्कली भ्याट काण्डमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेप्दै आएको चौधरी समूहले राज्यको मापदण्ड विपरित काम गर्दै आइरहेको समेत खुलासा भएको छ । यती समूहले पाएको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा हत्याउनदेखि दरबारमार्गको नेपाल ट्रस्टको जग्गा ... read more...
निलम्वित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई जोगाउन बैंक माफिया सक्रिय
२०७६ पुस १७ गते ११:४७
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्वित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग सरकारले स्पष्टिकरण सोधेसँगै उनलाई जोगाउन बैंकिङ माफियाहरुको एउटा गिरोह नै लागि परेको छ । खराव कर्जा प्रवाह गर्ने गिरोहले श्रेष्ठलाई जोगाउनका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद लामिछानेलाई हालतमा लिएको बुझिएको छ । लामिछानेलाई गभर्नर बनाउने आश्वसन दिएर उनीहरुले श्रेष्ठलाई जोगाउन चलखेल गरेका छन् । त्यसका लागि ए ... read more...
सिटिजन बैंकको एटिएम फुटाएर रकम चोरी गर्ने दुई जना समातिए
२०७६ पुस १३ गते २२:१०
काठमाडौं । महानगरी प्रहरी बृत्त थानकोटले बैंकको एटिएम फुटाएर रकम चोरी गर्दागर्दै दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मुगु सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर-६ घर भई हाल चन्द्रागिरी नरपालिका वडा नम्बर-५ दाउराडिपो बस्ने २४ बर्षीय चित्रबहादुर शाही र २० बर्षीय नन्दराज धराल रहेकाक छन् । उनीहरुले चन्द्रागिरी नगरपालिका-७ थानकोटस्थित सिटिजन बैंकको एटिएम फुटाएर रकम चोरी गर्न लागेको बेला प्रहरीले शनिबार राति ... read more...
एम्बोस्ड नम्बरको नाममा डरलाग्दो घोटला, अदालतमाथि प्रश्नचिन्ह
२०७६ पुस १२ गते ०९:५५
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले एम्बोस्ड नम्बरको नाममा भएको डरलाग्दो घोटलाको खुलासा गरेका छन् । राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समयमा एम्बोस्ड नम्बरको नाममा ठूलो घोटला भएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने,‘यही एम्बोस्ड नम्बरको नाममा अहिले ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मोटामोटी विदेशी कम्पनीले लैजाँ ... read more...
सम्झौता समयसीमा भन्दा ७ महिना पहिले नै पुल बन्यो
२०७६ पुस ११ गते ११:४६
दाङ । सवै जना निर्माण ब्यवसायी खराब हुन्छन् भन्ने मान्यता फेरि एक-पटक गलत सावित भएको छ । तुलसीपुर घोराही सडकखण्डको ग्वारखोलामा निर्माणाधिन पुल सम्झौता भएको मिति भन्दा ७ महिना पहिले नै निर्माण सकिएपछि सञ्चालनमा आएको छ । कालिका-रसुवा जेभीअन्तर्गत निर्माण भएको उक्त पुलको काम ३ बर्षभित्र सक्ने गरी गत ०७४ साल असार ११ गते ठेकका सम्झौता भएको थियो । तर उक्त ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको द ... read more...
हिमालयन बैंकका अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको फन्दामा, श्रेष्ठको चुरीफुरी सकियो
२०७६ पुस १० गते १०:२३
काठमाडौं । अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बीच लामो समयदेखि लफडा चल्दै आएको हिमालयन बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले चुनावी प्रक्रियाबाट सञ्चालक समिति चयन गर्न निर्देशन दिएसँगै अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठको चुरीफुरी कमजोर भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै एक सञ्चालकको पद गुमेर हिमालयन बैंकमा खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङ्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक भित्रने सम्भावना बढेको हो । राष्ट्र बै ... read more...
दुरुत्साहन मुद्दा: न अनुसन्धान, नत कारबाही, राठीलाई प्रहरीको साथ ?
२०७६ पुस १० गते १०:०२
सिराह । मारुती सिमेन्ट उद्योगले तलबलगायतका सुविधा कटौती गरेको विषयमा अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा उल्टै व्यवस्थापनले पेलेको भन्दै एक महिलाले आत्महत्या गरिन् । तर, सिमेन्ट उद्योगले ति महिलाको परिवारलाई ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिएर घटनालाई थामथुप पारेको छ । आफ्नो हक हितका लागि आवाज उठाउँदा यसरी आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकलाई न त प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्यो न त प्रश ... read more...
कमजोर सुरक्षा तथा प्रविधि: विदेशी ह्याकर समूह नेपालमा चलायमान
२०७६ पुस ९ गते ०९:०८
काठमाडौं । नेपालका बैंकका एटिएम ह्याकिङमा चिनियाँ पक्राउ परेको धेरै भएको छैन । त्यस्तै खाता ह्याकिङमा पिटर काले भन्ने समूहका सदस्य सक्रिय रहेको र बैंकका कर्मचारीको पनि मिलोमतो हुनसक्ने अनुसन्धान जारी छ । यो क्रममा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहदेखि राज्यका तथ्यांक नै बुझ्नका लागि अर्को ह्याकर समूह सक्रिय रहेको तथ्य फेला परेको छ । जसका बारेमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी ... read more...
पाल्पाको मित्यालमा हावाबाटै निकालियो २५ किलोवाट क्षमताको बिजुली
२०७६ पुस ६ गते १०:३३
पाल्पा । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाको मित्यालमा हावाबाट बिजुली बत्ती बालिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र नेपालको एक करोड ८० लाख र गाउँपालिकाको ४२ लाख १३ हजार ८०० को लागतमा हावाबाट बिजुली निकालिएको हो । हावाबाट १५ किलोवाट र वायु तथा सौर्य ऊर्जा हाइब्रिड प्रणलीमार्फत १० किलोवाट गरी २५ किलोवाट क्षमताको बिजुली निकालिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुपिन्द्र सुनारी मगरले जानकारी दिए । करीब साढे ... read more...
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ती गर्ने सम्झौता भएको छ । काठमाडौंको कलमपोखरीस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्राइम बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ न्यूप्लाजास्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको 'ख' वर्गको वित्तीय संस्था कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ती गरेसँगै प्राइमको कुल शाखा संख्या १९९ पुगेको छ । सो सम्झौता पत्रमा प्राइम बैंकका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ... read more...
मारुतीका राठीको बदमासी, ७ लाख दिएर ज्यान मुद्दा डिसमिस
२०७६ पुस २ गते १४:१९
लहान । घटना गत मंसिर २३ गतेको हो । मारुती सिमेन्ट उद्योगमा स्थापनाकालेखिनै स्थायी कर्मचारीका रुपमा कार्यरत सिराहा गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर-९ निवासी अनिता पासवानले घर नजिकै रुखमा झण्डिएर आत्महत्या गरिन् । कारण थियो-कर्मचारी यूनियनको सदस्यसमेत रहेकी अनिताले कर्मचारी हकहितको आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् । त्यसपछि रुष्ट बनेको मारुती सिमेन्टको प्रशासनले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन मात्र गरेन, बर् ... read more...
हुण्डाई र कियाको मनपरी: आफू छिर्न अरुलाई अड्काउने पासो
२०७६ पुस २ गते ०९:५७
काठमाडौं । सरकारले विद्युतिय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्र्न राजश्वमा समेत भारी छुट दिएको छ । इन्धनबाट चल्ने साना सवारीमा २ दुई सय ५० प्रतिशत राजश्व लिँदै आए पनि विद्युतिय गाडीमा जम्मा २९ प्रतिशतमै खरिद कर्ताले पाउने व्यवस्था छ । तर सरकारको यहि योजनामा केही कर्मचारीले भने बिभिन्न कारण देखाउँदै बाधा उत्पन्न गराएका छन् । हुण्डाई र किया कोरियन कम्पनीले कोना र निरो विद्युतिय गाडी नेपालमा भित्राएर बिक्री बित ... read more...
कालासूचीमा ठेकेदार कम्पनीः सवा दुई अर्बको ठेक्का अलपत्र
२०७६ मंसिर ३० गते १४:५४
धनगढी । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको रमन कन्सट्रक्सनका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा लागू भएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्योलमा परेका छन् । पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको अढाई वर्षसम्म निर्माणको काम सुरु भएको छैन । पहिले फोहरमैला व्यस्थापनका लागि जग्गा नपाएका कारण ढिलाई भएको थियो भने पछिल्लो समय कालोसूचीमा परेको रमन कन्सट्रक्सनका कारण ढिलाइ भएको हो। असारम ... read more...
‘बिलियन डलर स्टोरी’ मा चौधरीः ‘अवसर कुर्ने होइन, सिर्जना गर्ने हो’
२०७६ मंसिर २९ गते १३:१५
पोखरा । सिजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष विनोद चौधरी शनिबार साँझ पोखराका युवा उद्यमीहरुमाझ प्रस्तुत भए । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाइइएफ) पोखराले आयोजना गरेको ‘बिलियन डलर स्टोरी’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले पोखराका युवा उद्यमीहरुलाई लगानीका लागि अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गरे । ‘अहिलेका युवा उद्यमीहरुले लगानीका लागि अवसर कुरेर बस्ने होइन,’ उनले भने, ‘आफैले अवसर सिर्जना गर्ने हो ... read more...
चुइगम चपाएरै सकाइयो साढे १८ करोड
काठमाडौं । देखासिकी र फजुल खर्चमा आकर्षित नेपाली उपभोक्ताले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बितेका चार महिनामा चुइगम चपाएरै साढे १८ करोड रुपैयाँ सकेका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म ६ लाख २१ हजार ६ सय ८ किलो चुइगम नेपाल भित्रिएको छ । यसको मूल्य १८ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यसैगरी, गत आवका चार महिनाको तुलनामा चालू आवको ... read more...